5 moodellada Dutchka ah ee lagu raaco barta Instagram | Ragga Stylish
Ilaa sanado qaar, Quruxda Nederlandka ayaa kujirta xagga sare xagga moodada. Tirada moodooyinka ugu sareeya ee ku dhashay Nederland waa wax layaableh marka loo fiiriyo inay kaliya leeyihiin 16 milyan oo qof.
Kalluumeysiga iyo daboolku maahan waxa keliya ee ay qabsadeen. Moodooyinka Dutch sidoo kale Waxay tirtirayaan Instagram. Kuwani waa shanta ay tahay inaad tixgeliso raacitaankooda haddii aad rabto caawimaad wanaagsan oo ah quruxda Nederlandka ee quudintaada.
Teeth Hadid (@nacaybtire)
Tartankan Dutch-ka ah (gabadha moodada iyo xidigta telefishanka u ah Yolanda Hadid) waxay gaadhay ugu yaraan 23,6 milyan oo raacsan. Muuqaalka qaabka soo jiidashada leh, Instagram-keeda ayaa soo qaadatay darajooyin walba oo cusub oo ay ku soo korortay xirfadeeda si ay u noqoto xidig caan ah oo ay maanta tahay.
Kutes Doutzen (@nacaybtire)
Waxaa la aasaasay sanado, Doutzen wuxuu ka mid yahay kuwa masuulka ka ah dugsiga Nederlandka inuu gaaro heerkiisa ugu sarreeya. Waxay xirtay baalasheeda qarsoon ee Victoria sanadkii 2015, in kasta oo wajigeedu uu sii ahaanayo mashiin lacag sameeya. Qandaraasyadeeda shirkadaha qurxinta ayaa ah riyada nooc kasta.
Romee strijd (@nacaybtire)
Markuu jiro 21 sano oo kaliya, Romee wuxuu horeyba ugu faani karaa inuu soo bandhigay Victoria's Secret (labo jeer), iyo sidoo kale catwalks-ka adduunka ugu waaweyn (Paris, New York, Milan). Tiro badan oo dhoola cadeynaya oo dhalaali kara barafka, tirada taageerayaashiisu waxay bilaabeen safarka meelaha dhaadheer, oo aan ka yarayn 2,2 milyan, sida xirfadiisa oo kale.
Bregje Heinen (@nacaybtire)
Hadday timo cad tahay, indho fududahay, magaceeduna ku adag yahay in lagu dhawaaqo, waxay u badan tahay inay Dutch tahay. New Yorker oo korsasho ah, quruxda badan Bregje waxay ku socotaa nus milyan taageerayaal ah.
Imaan Xamaam (@nacaybtire)
Asal ahaan reer Marooko iyo Masaari, Imaan wuxuu ku jabaa fikradda ah nooca Dutch-ka ah ... taasina ma aha waxa kaliya ee jabiya. Waa mid ka mid ah mannequins-ka ku tumaya kan ugu adag catwalk. Bakhaar leh weji magnetic ah oo ay wadaagaan Milan, Paris iyo New York. Tan ugu fiicana waa soo socota, maadaama uu isagu aad uyar yahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Moodooyinka Dutch-ka ee qabsaday Instagram
Varela Intimate Pajamas dijo
Ubaxyada awoodda. 🙂
Ujawaab Varela Intimate Pajamas
Saddexda nooc ee dhididka waa inaad tixgelisaa wixii hadda ka dambeeya